How to write Algorithm of Friend Suggestion Feature? (like facebook) — MYSTERY ZILLION
How to write Algorithm of Friend Suggestion Feature? (like facebook)
November 2012 edited November 2012 in Programming
ကျွန်တော် အခုရေးနေတဲ့ Project တစ်ခုမှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကြိုက်၊ သွားဖူးတဲ့နေရာ၊လုပ်ဖူးတဲ့အရာ၊အမှတ်တရ၊ သူ့သူငယ်ချင်း စတာတွေကို ကြည့်ပြီး တူတဲ့အဖြစ်အပျက်( အကြိုက်ဆုံးအစားအစာ) ကိုကြည့်ပြီး တခြားသူတွေကို အဲ့နေရာ​ရောက်ရင် အဲ့အစားအစာကို စားအုံးမလားဆိုပြီး Suggest လုပ်မယ်။ ပြီးတော့ Facebook ကဘယ်လိုလုပ်ပြီး Friend ကို suggest လုပ်လဲဆိုတာ သိရင်ပြောပြပေးပါ။ စဉ်းစားနေတာ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
Thanked by3livollvict ofalolati illikintann
November 2012 edited November 2012 Administrators
already have answer